Izindlela ezijwayelekile ezisetshenziselwa ukuphrinta eChina-Blog-Book Printing China
Izindlela ezejwayelekile zazisebenzisa ukuphrinta eChina
isikhathi: 2020-11-20 Okuhamba phambili kwe-: 13
Kwabaningi izimboni zokuphrinta eChina, indlela yokuphrinta yombhalo nezithombe ephepheni noma kwifilimu ingahlukaniswa nge-letterpress, i-lithographic, intaglio, futhi amapuleti perforated ngokusho ukuma ipuleti, futhi zisetshenziswa ngokwenhloso. Lobu buchwepheshe obujwayelekile bokuphrinta buvele busuka ekulingiseni buya kwidijithali, bese ixhunywe kunethiwekhi ukushintsha ukubukeka kwayo.
Ake ngigxile emandleni obuchwepheshe bokuphrinta obunemba kakhulu nokusebenza kwayo kubunjiniyela be-elekthronikhi ukuhlaziya isimo samanje sokuphrinta nge-offset (i-lithographic) nokuphrinta kwesikrini (ukulandelana). Ngenjwayelo, kungacatshangelwa ukuthi i-viscosity ye-ink iphezulu kakhulu futhi ubukhulu bokwenza ifilimu buzacile, futhi ukukhiqizwa kabusha okuhle komugqa kubonakala kungcono.
Njengesibonelo esithandwa kakhulu sokuphrinta nge-offset ku Izimboni zokunyathelisa zaseChina, kube nezimo lapho ikhava yombala kamagazini wamasonto onke yaphrintwa ngayo 700 olayini phesheya kwezilwandle. ngokuvamile 175 imigqa isetshenziselwa ukuphrinta, kepha ngokungazelelwe nginqume ukusebenzisa 700 imigqa yokuphrinta. Kunjalo, ukuvezwa kwezingxenye ezinhle kuzothuthukiswa. Izithombe ezingabonakali ngeso lenyama zingabonakala ngokucacile ngokubheka ngengilazi yokukhulisa. Ngoba ichashazi, yize ububanzi bomugqa omncane kunzima ukukhombisa, isengabonakala kuze kufike ku-20μ. Nokho, lokhu kukhombisa kuphela isithombe esiphrintiwe. Uma kukhulunywa ngemodeli yokukhiqizwa kabusha kwezicelo zobunjiniyela be-elektroniki, izidingo ziqinile kakhulu. Lokhu ikakhulukazi kungenxa yobuningi be-inki obanele.
Ngaphezu kwalokho, njengesibonelo sokuphrinta kwe-intaglio, umbhalo omuhle kanye nokufiphaza okuhle kuprintwe okwenziwa ngamasheya mbumbulu, ukuphepha, njll. Uma ubheka le ngxenye yesithombe ngengilazi yokukhulisa, ungahle ubone ukukhiqizwa kabusha kwemigqa emihle ka-10-20μ. Sengisho nje, uma kuqhathaniswa nokuphrinta nge-offset, ukuphrinta kwe-gravure kungakhulisa ukushuba kwefilimu likayinki, ngakho-ke kunenzuzo ekusetshenzisweni kobunjiniyela be-elekthronikhi.
Kusetshenziswa ukuphrinta kwe-gravure offset ukuphrinta isibuko sombala we-LCD
Nasi isibonelo sokusebenzisa ukuphrinta kwe-gravure offset ukuphrinta izibuko zombala ze-LCD. Indlela yokuphrinta okusetshenziswa kuyo uyinki kupuleti le-intaglio bese idluliselwa engubeni ye-silicon, bese kuthi yonke imali idluliselwe kupuleti lengilazi. Ngesikhathi sokukhiqiza ngobuningi, ngosayizi wedizayini, isibuko sombala esinobubanzi bomugqa we 40 ~ 50 μ yaphrintwa yafakwa emakethe. Nokho, ukukhishwa okusele ukuqabuleka kobuso bemodeli.
Njengendlela yokwenza ngcono ukuhlala phansi, indlela ephrintiwe yokuphrinta yenziwe. Lokhu ukuqala ukugqoka uyinki ngqo ngengubo, susa izingxenye ezingadingekile ngepuleti yokusiza engemihle, futhi ekugcineni ulidlulisele kupuleti elicwebe ingilazi ngokulandelana. Ubucayi bemodeli buxhomeke ngokuphelele ekufaneni nasekubusheleleni kongqimba lukayinki oluhlanganiswe ngengubo. Ngakho-ke, kungashiwo ukuthi kuqhathaniswa nendlela yokuphrinta ye-gravure offset, le ndlela igxila ebunzimeni bokulawulwa kwesicaba.
Okwangaphambilini Ikhasi : Ulwazi oluyisisekelo lokuphrinta izincwadi
Ikhasi Elilandelayo : Yini izinto ngentengo yekhathalogi yokuphrinta i-china?